Wararka Wargeyska OGAAL, cadadkii Maanta, Sabti, 29 Dec. | Somaliland.Org
December 29, 2007	“Waxa Jiray rabshado iyo qalalaasayaal weeraro xambaarsanaa”
Siday sheegeen dad goob-joogaayaal ahi, labada qof ee dhintay ayaa ka mid ah Ciidamada Booliska ee Maamulka Cabdilaahi Yuusuf. Kuwaas oo ay si gaadmo ah u dileen laba nin oo ku hubaysan Baastoolado.
Weerarkan ayaa ka dhacay Meel la yidhaahdo Siin dheer, oo masaafo 13km ah dhinaca Koonfureed ka xigta Muqdisho. Halkaas oo boqollaal ka mid ah dadka ka baro kacay Dagaallada Muqdisho ay ku nool yihiin.
Sidoo kale, Cabdi Qaybdiid oo ah taliyaha ciidanka Boliska dawlada Cabdilaahi Yuusuf ayaa ka badbaaday qarax miino oo lala beegsaday shalay.
Qaraxan oo ka dhacay Agagaarka Deegaanka Ceelasha Biyaha oo u dhaxeeya Magaalooyinka Afgooye iyo Muqdisho ayaa ahaa Miino nooca Meelaha fog laga hago ah. Waxaana Miinadan lala eegtay Kolonyo Gaadiid ah oo galbinaysay Cabdi Qaybdiid iyo Koox Fanaaniin ah oo Booliskaasi ka tirsan, kuwaasoo u sii jeeday Magaaladda Muqdisho.
Sida laggu faafiyay shabakaddaha wararka lama oga khasaaraha uu geystay qaraxaasi,. Waxaana ay Goobjoogayaal ka agdhawaa halkaasi ay u sheegeen idaacadda Shabelle in Qaraxa ka dib ay Rasaas xooggan fureen Ciidamaddii Illaalada u ahaa Cabdi Qaybdiid, taasoo argagax gelisay dadkaasi.
Gallad Cusmaan Cali oo ku sugnaa Waqtigii uu Qaruxu dhacayay Deegaankaasi oo ay deganyihiin dadkii ka barro kacay Muqdisho in markii ay gudubtay Kolonyaddii galbinaysay Cabdi Qaybdiid Ciidamadiisu ay halkaasi ka qabqabteen illaa 6 – Qof oo ka mid ah Dadkii ka barakacay Muqdisho.
Maaha markii ugu horaysay ee ay halkaasi ka dhacaan Qaraxyo sababay dhibaato gaadhay dadka ku barakacay halkaasi, iyo qaraxyo lala doonayo in lagu khaarajiyo masuuliyiinta dawlada Cabdilaahi Yuusuf iyo Ciidamada taageerayaasha ah ee Itoobiya.
Maydadka afar qof oo ayaa iyagana la sheegay in shalay laga helay Xaafadda Suuqa Xoolaha iyo degmada Huriwaa ee dhinaca Waqooyi ee Magaalada Muqdisho. Halkaas oo la sheegay inuu dagaal ba’ani ku dhex maray Kooxaha ka dagaallamaya Muqdisho iyo Ciidamada Itoobiyaanka oo ay weheliyaan Xulafadooda Maamulka Mbeghati. Dadka dhintay ayaa loo tuhunsan yahay inay dileen Ciidamada Itoobiyaanku. Kuwaas oo carqaladeeyay goobtii uu isku dhacu ku dhex maray iyaga iyo Kooxaha dagaalka kula jira.
Sidoo kale, Bam la dhigay waddada dhinaciisa, ayaa la sheegay inuu qarxay, halkaas oo ay marayeen Baabuur waday Ciidamo ka tirsan Maamulka Mbeghati. Hase ahaatee, wararku ma sheegin wax khasaare naf ah oo uu geystay Qaraxaasi.
“Waxa jira waxyaabo ka xun dhimashada”
Bosaaso (Ogaal)- Faadumo Cabdilaahi, waa 30 jir ka soo carartay Magaalada Muqdisho ee Somalia, waxaanay muddo 10 maalmood ah socotay 1,500km. iyada oo u kala socdaashay Magaalooyinka Afgooye oo 30km dhinaca Koonfureed ka xigta Muqdisho iyo Magaalada Boosaaso ee Maamul-gobolleedka Puntland ee Somalia.
Faadumo waxay hooyadeed oo ku sugan Kaam Qaxooti oo aad u silic badan oo ku yaala Magaalada Afgooye kaga timi 4 Carruur ah oo ay dhashay. Kuwaas oo ay iyaga dartood u gashay socodka intaa le’eg, si ay ugu noolaadaan nolol ka wacan tan ay hadda ku nool yihiin ee saxariirka badan. Waxa baytal-qasiidkeedu ahaa inay u tahriibto oo ay tagto dalka Yemen, isla markaana u dhaafto dalka Sacuudiga. Halkaas oo ay naftu badday inay u socdaasho Magaalo-dekedeedda laga bilaabo socodka aadka u khatarta badan ee Tahriibta (Boosaaso). Iyada oo ka waramaysa waxay mudatay iyo siday waayaha nolosha u qaabishay, ayaa waxay hadalkeeda ku bilowday,
“Waxaanu ku noolayn Xaafadda Xamar-jajab (Koonfurta Muqdisho), waxaan suuqa ku iibin jiray Khudradda, si aan nolol-maalmeed ugu soo saaro Qoyskayga. Laakiin, inaanu suuqa u baxnaa waxay noqotay khatar aad u daran. Markii aanu qaxnay, hooyaday waxay ii soo jeedisay inaan socdaalo oo aan soo raadiyo nolol wacan, oo iyaduna ay Caruurta sii hayso. Markaas ayaan go’aansaday inaan Boosaaso imaaddo, oo aan tago Yemen, oo aan u dhaafo Sacuudiga.
Socdaalkaygii Boosaaso wuxuu igu qaatay 10 maalmood, halkaas oo dad badan oo ila mid ahi ay imanayeen. Qaar badan oo dadkaasi ka mid ah, ayay jidka ku dhaceen Maleeshiyo, kuwaas oo jid-gooyo dhigtay waddada. Halkaas oo ay mararka qaar dadka qaarkood tooganayeen. Gaadhigii aanu saarnayn aad buu u nasiib badnaa, sababtoo ah intii aanu jidka ku soo jirnay lamaanu kulmin wax dhib ah. Halka dad kale oo saarnaa gaadhi kale ay nasiib darnaayeen, kuwaas oo laba ka mid ah la dhaawacay, waxaana laga yimi mid ka mid ah Degmo yar oo ku taalay Jidkii aanu soo maraynay ee ku soo socday Boosaaso.
Ehel iyo qaraabo toona halkan (Boosaaso) iima joogto, sidaa darteed waxaan ku noolahay Kaam (Kaam Qaxooti oo ay ku jiraan dadka soo baro-kacay). Maalintii iyo habeenkiiba waxaan tagaa guryaha reeraha, waxaanan ka guraa Xashiishka, waxaanay I siiyaan 5,000 Somali Shilin ah markii aan qaadaba. Maalinta ugu wanaagsan waxaan qaataa 25,000 oo Somali Shilin ah, hase ahaatee maalmaha qaarkood ayaanan waxba helin oo aan wax waayaa.
Waan ogahanay oo waan garanayaa khatarta aan waajahayo tagitaankayga Yemen. Laakiin, waa maxay farqiga u dhaxeeyaa (Muqdisho iyo Yemen)? Muqdisho, kama war qabtid maalintii, ilaa aad aragto marka dambe iyada oo gabbalku dhacay. Waxaad maqlaysaa dumar la kufsaday oo la dhacay maalin kasta. Mid ka mid ah Jaarkayga ayaa la kufsaday, oo markii dambe si xun Ciidamadu ugu garaaceen Qori dabadii, waxay gashay Cusbatal, manay dhiman, mana noola. Markaas ayay ahayd markii aan aniga iyo Hooyaday go’aansanay inaan maro Jidkan khatarta badan ee tegitaanka Sacuudiga. Waan ogahay in tegitaanka Yemen aan ku dhiman karo, hase ahaatee waa mar kaliya. Waxa jira waxyaabo ka xun dhimashada qaar ka mid ah. Taas oo ah joogitaanka Muqdisho”
Hargeysa: Falalka Budhcadnimo iyo sugidda ammniga ‘Sakaaradii Budhka la kulantay’
Hargeysa(Ogaal) – Waxa mudooyinkii ugu danbaysay ku soo kordhayay caasimadda Somaliland ee Hargeysa, falal budhcaddnimo oo inta badan ay ku kacaan kooxo dhalinyaro ahi.
Kulan amuurtan lagu lafagurayay oo lagu qabtay demadda Ibraahim Koodbuur ee magaalada Hargeysa oo ay ka qaybgaleen masuuliyiin ay ka mid yihiin Wasiirka Arrimaha Gudaha Somaliland mudane Cabdillaahi Ismaaciil Cali (Cabdilaahi Ciro) Maayar ku xigeenka Hargeysa, Mudane Maxamed Cabdilaahi Uurcadde iyo qaar ka mid ah waalidiinta degan xaafadaasi ayaa taliyayaasha saldhigyadda iyo rugaha Boliska ee degmada Ibraahim Koodbuur waxa ay ka warbixino kaga bixiyeen xaalada xaafadaasi, Islamarkaana waxa la islaqaatay in la xoojiyo ammniga, sida lagu faafiyay shabakadda wararka intarnetka ee Waaheen.
Marar kala duwan ayay ciiddamada Bolisku qaadeen hawlgalo falalka budhcadnimo wax lagaga qabanayo, in kastoo hawlgaladaas si weyn loo soo dhaweeyay, haddana waxa mararka qaar talaabooyinka lagu sugayo amaanku galaaftaan dhalinyaro badan oo aan waxba galabsan. Islamarkaana dugsiyadda ku jira, iyadoo loo arko in gudiga nabadgalyaduna degdegsiiyo xabsiga ugu gudbiyaan. Iyaga oo aan hubsanin xataa inta macne ahaan noqonaysa “Sakaaradii budhka la kulantay”. Ee aan rabshadda ama dhibaatada loo soo qabtay waxba kala socon.
Inta badan dhibaatooyinka dhaliyaradda ka timaada ayaa loo aaneeyaa inay ugu weynyihiin sababaha keena shaqo la’aan baahsan ee ka jirta dalka, taasoo qayb muhiim ah ka ah arimaha sida weyn loogu dhaliilo xukuumada Madaxweyne Rayaale.
Go’aamo laga soo saaray shir ay yeesheen Haweenka isaga yimi Gobolada Somaliland
Hargeysa (Ogaal)- Shirweyne ay isugu yimaadeen 100 – xubnood oo ka socday Haweenka Somaliland oo ka kala yimi lixda Gobol ee dalka, ayaa maalintii Khamiistii lagu soo gebogebeeyay Magaalada Hargeysa. isla markaana laga soo saaray baaq ka kooban qoddobo kala duwan.
Shirkan ayaa ka qayb galayaashu kaga doodeen sidii ay Haweenku uga qayb qaadan lahaayeen saaxadda go’aan qaadashada dalka iyo sidoo kale sidii ay kaalin hor leh uga geli lahaayeen arrimaha bulshada. Halkaas oo ay saddexdii maalmood ee shirkani socday laga soo jeediyey warbixino ku saabsan arrimahaas. Haweenka isugu yimi Shirweynahan, ayaa 40 ka mid ahi ka socdeen Gobolka Maroodi jeex ee Hargeysa, halka 60-ka kalena ay ka kala socdeen 5-ta gobol ee kale. Waxaanay ka qayb galayaashaas oo ka kala tirsan Ururada Haweenka Gobollada dalka iyo sidoo kale haweenka hormoodka ka ah dhaqdhaqaaqyada deegaanada ay ku nool yihiin. Waxa xafladdii xidhitaanka goob joog ka ahaa Wasiirada Ganacsiga Cismaan Qaasim Qodax iyo Deegaanka iyo Horumarinta reer Miyiga Fu’aad Aadan Cadde.
Gebogebadii shirkaas, ugu horayn waxa hadal ka jeedisay Guddoomiyaha Dalladda Nagaad Marwo Sucaad Ibraahim Cabdi, oo sharaxaad ka bixisay ujeedada shirka. Isla markaana aad ugu dheeraatay muhiimadda Shirka.
Waxa kale oo halkaa hadal ka jeediyay Wasiirka Ganacsiga Somaliland Cismaan Qaasim Qodax, oo ka hadlay masuuliyadda Dumarka iyo kaalinta ay Bulshada kaga jiraan.
Wasiirka Deegaanka iyo Horumarinta reer Miyiga Somaliland Fu’aad Aadan Cadde, ayaa sidoo kale isna ka mid ahaa Masuuliyiintii ka hadlay gebagebada shirkaas. Waxaanu ku dheeraaday doorka ay Haweenku ka qaataan dhismaha Bulshada.
sidoo kale waxa halkaa hadal ka jeedisay Yaasmiin Maxamed Nuur oo ka socotay Ururka Sahan.
Baaqii laga soo saaray shirwaynahaas ayaa wuxuu u dhignaa sidan;
‘Ka dib markii aannu aragney kaalinta haweenka ku leeyihiin horumarka wadanka iyo dib-dhiska.
Ka dib markii aannu aragney doorka ay haweenku ku leeyihiin ka qeybqaadashada kobcinta dhaqaalaha, waxbarashada, caafimaadka iyo kaalinta siyaasaadda.
Ka dib markii aannu aragnay muhiimada ay leedahay in haweenku ka muuqan saaxadda go’aan qaadashada.
Ka dib markii aannu aragnay muhiimada ay leedahay in haweenku ka qaataan kaalin mug leh dhamaan dhinacyada khuseeya noloshooda
Ka dib markaanu aragnay baahida jirta ee dhinaca arrimaha bulshada, garsoorka, siyaasadda iyo dhaqaalaha
Waxa annaga oo ka kooban haween ka yimid lixda gobal (Sanaag, Sool , Togdheer, Saaxil, Maroodi jeex, iyo Awdal) ee Somaliland iskugu nimi shirkan oo soconayay muddo seddex maalmood ah 25, 26, 27 December 2007. Markii arrimahaa si qoto dheer loo lafa guray waxa ay haweenka ka soo qaybgalay ka soo saareen baaq ku wajahan xukuumadda iyo golayaasha sharci dejinta oo ah sidan soo socata:
I. HAWEENKA IYO TALADA DALKA
-In ay dawladu xaqiijiso xuquuqda dastuuriga ah ee ku qeexan qodabadda 8aad iyo 36aad ee sinaanta xuquuqda muwaadiniinta, waxa xukuumada Somaliland iyo golayaasha sharci dajinta loogu baaqaya in ay soo saaran sharci xaqiijinaya ka qaybqaadashada haweenka ee taladda dalka.
-Waxbarasho la xidhiidha kobcinta garaadka siyaasadda ee haweenka.
-Sanduuq dhaqaale oo loo sameeyo haweenka
-In wacyigalin loo sameeyo haweenka, taasoo lagu dhiirigalinayo sidii ay haweenku isuigu tiirsan lahaayeen
II. ARRIMAHA BULSHADA Dhinaca waxbarashada -In ay dawladdu hirgaliso waxbarasho baahsan oo ay ka faa’iidaystaan dhamaan qaybaha bulshada sida dadka saboolka, reer guuraaga, hablaha guryaha lagu hayo, waa in xukuumadu ay fidiso sida dastuurka waafaqsan waxbarasho bilaash ah ilaa heer jamacadeed ah.
-Kor u qaadida haweenka xagga waxbarshada, gaar ahaan waxbarashada dadban. In la sameeyo goobo loogu tallo galey in kor loogu qaado tayada waxbarasho ee haweenka muddo ka maqnaa waxbarashadda.
-In la tayeeyo waxbarashadda waa in kor loo qaado aqoonta barayaasha, isla markaana loo helo mushahar ku filan.
-Ilo dhaqaale la sameeyo , lana sameeyo xirfada shaqo abuurid?
-In la helo qorshayaal lagu hor marinayo tayada waxbarashada dadban ee haweenka oo u dhiganta ta asaasiga ah ilaa heer jamacadeed iyo abuurida xirfado shaqo
-Naafadda waa in la dhiirgaliyo sidii waxabarasho u heli lahaayeen.
Dhinaca caafimaadka -In wasaaradda caafimaadku soo noolayso habka saami qaybinta gobollada ee shaqaalaha xirfada leh sida dhakhaartiirta iyo kalkaaliyayaasha sare. Si loo badbaadiyo hooyooyinka iyo dhalaanka u dhinta daryeel la,aan caafimaad xilliga dhalmada
-In la loo fidiyo tababaro joogta dhakhaatiira, kalkaaliyayasha si ay u ogaadaan howlaha caafimaad iyo in la siiyo mushahar ku filan
-In wasaaradda caafimaadku soo saarto qorshayaal lagu horimarinayo tababaro loo fidinayo dadka deegaanka (degmooyinka, tuuloyinka) ku nool. Si loo helo dad aqoon cafimaad leh
-In kor loo qaado tayada goobaha caafimaadka illaa heer degmo, tuulo. Taasoo loo sameynaya xurmo caafimaad(MCH) goob kasta oo ay muhiim ku tahay.
-In la soo saaro shuruuc xakamaynaya tayada dawooyinka lana helo wax lagu xadidayo farmisiiyada sida xad dhaafka ah u furmaya ee aan aqoon caafimaad lahayn
-Wasaaradda caafimaadka iyo wasaarada ganacsiga waa in ay si wada jir ah u soo saaraan shuruuc lagu joojinaayo dawooyinka maskax ahaan, jidh ahaan iyo caafimaad ahaanba wax yeeli kara qofka sida kuwa badala midabka
-In la sameeyo wacyigalin lagu joojinayo gudniinka fircooniga ah. Wacyigalintaasi waa in ay gaadho wadanka oo dhan ilaa heer tuullo,degmo iyo gobal.
III. GARSOORKA IYO HAWEENKA -In la xoojiyo dhaqangalinta shuruucda la xidhiidha arrimaha qoyska, isla markaana la cadeeyo cidda ka masuulka ka ah hirgalinta shuruucda. Meeshana laga saarayo xeer-dhaqameedka iyo odey-dhaqameedyada.
-Si loo yareeyo furiinka sii kordhaya wadanka waa in la dhiirigaliyo sidii loogu dhaqmi shareecadda islaamka arrimaha la xidhiidha qoyska
-In la sameeyo shuruuc lagu xakamaynayo tacadiga haweenka loo gaysto, sida kufsiga, garaacista. Khilaafaadka arrimaha qoyska waa in lagu xaliyo shareecada islaamka oo kaliya. – In la kordhiyo goobaha adeega sharciga ee haweenka aan awoodin inay helaan adeeg sharciyeed, lana gaadhsiiyo Goballada dalka oo dhan (legal Clinic).
IV. HAWEENKA IYO KOBCINTA DHAQAALAHA -In xukuumadu soo saarto sharciga kala xadaynta ganacsiga si kor loogu qaado dhaqaalaha ganacsatada yar yar
-Aqoonta haweenka in kor loo qaado
-In la adkeeyo sanduuq dhaqaale oo haweenka ganacsiga ku jiraa ay leeyihiin
-In la xoojiyo meelaha ay ka jiraan guddiyo ganacsi ee haweenka, lana sameeyo meelaha aaney ka jirin.